Fitrandrahana fasimainty ao Faradofay Vonon-kanakana koa ireo mponina
Mahatratra 246 ny isan’ny fiangonana ao anatin’ny Synodam-paritany FJKM Boina vaovao. Miisa 77 ny fitandremana ary 8 ny sekoly. Miisa 8 ihany koa ny toeram-pitsaboana. Samy mampiasa olona avokoa ireo toeram-piasana avy amin’ny sehatra samihafa ireo ka ny CNaPS no miandraikitra ny fiahiana ara-tsosialin’izy ireo. Nahazo tombony tamin’ny fiofanana ny mpitandrina, ny katekista, ny mpampianatra sy mpitsabo ao anatin’ny Synodam-paritany Boina vaovao. Efa saika mpikambana CNaPS avokoa ny eo anivon’ny fiangonana, raha toa ka misedra olana kosa ny sekoly amin’ny fanefanany latsakemboka eo anivon’ny CNaPS noho ny hakelin’ny saram-pianarana, hoy ny mpitandrina Rakotomalala Jean Olivier prézidà synodaly Boina Vaovao. Vahaolana hafa no tsy maintsy karohina, hoy hatrany ny filohan’ny synoda.Nivoitra nandritra ny atrikasa ireo karazana fanampiana omen’ny CNaPS ho an’ny mpiasa sy ny vady aman-janany, izay marihina fa tsy maintsy anaovana fangatahana avokoa miaraka amin’ireo antontan-taratasy havaozina isan-taona mba tsy hampiatona ny zo. Distrika fito moa no mandrafitra ny synoda Boina Vaovao manomboka any Soalala, Mitsinjo, Mahajanga Voalohany sy Faharoa, Marovoay, Ambato-Boeny, Tsaratanàna ary Maevatanàna.